SAMOTALIS: 18KA MAY WAA MAALIN MIDNIMO OO QARANKU U DHAN YAHAY -AXMED CARWO
18KA MAY WAA MAALIN MIDNIMO OO QARANKU U DHAN YAHAY -AXMED CARWO
Waa afar iyo labaatan jir. Waa qaangaadh dhammeys ah. Waxa reer Somaliland debed iyo gudaba, dhalaan, dhalinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, miyi iyo magaalo, waxay is-dhaafsanayaan salaan iyo bogaadin kal iyo lab ah
Waa mahad AllE oo dalkeena Somaliland waxuu ku sugan yahay nabad, ammaan, barkhad iyo baddhaadhe. Waxa dhiman waa aqoonsi caalami ah, waa mid aynu ku gaadhi doono samir, wadajir iyo dedaal, iyo mahadda Alle.
Qaranimada Soomaliland waxa loo huray dhiig, maal iyo nool. Waxa lagu helay kifaax hubaysan oo ururkii SNM ku guulaysatay. Waxaana lagu fooladeeyey Burco 18kii May 1991, kolkii qalin iyo qalbiba ay ku midoobeen beelahii SNM iyo beelihii ka baxsanaa ururka, ka dib markii dood dheer oo cad, si siman loo gorfeeyey.Waxa leysku raacay in lala soo noqdo qaranimadii luntay 1960, waxaana la dhisay dawlad ay hogaaminayso SNM muddo laba sano ah. Waxaana Madaxweynahii u horeeyey noqday Cabdirahmaan Axmed Cali Allah ha u naxariistee. Waxaa la dhisay Guurti lagu soo daray beelihii darafyada iyo xukuumad loo dhan yahay oo beelahu kulmisay.
Illaahay mahadi ha ka gaadhee, dalku waa nabad, dadkuna waa dar niyad wacan oo ididiilo wanaagsan hiigsanaaya. Waxa jirta colaad inagu xeeran, waxa jirta qabyaalad curyaamisay qaranka, waxa jirta dhutis dhaqaale, Waxa se hubaal ah in xukuumadda Axmed Maxamed wax weyn qabatay oo marag ma doon ah, maanta ujeedadu ma aha inaan taas taabto, waayo mucaaridkaan rabaa inay la farxaan. Waxa dhimman waa qaar u baahan wadajir iyo gacmaha oo aynu is qabsano. Waa bedel dhaqanka qabiilka ee siyaasadda galay, mana aha mid xisbi keliye bedeli karo, waa mid mucaarid iyo muxaafidba u baahan. Dawladnimadu waa guri oo kale oo haddii meel dilaacdo oon dilaacaas la gufeen ay galaafan doonto guriga oo dhan. Waxa dalku qaatay nidaam dimuquraadi ah oo ku salaysan axsaabta badan. Taasi waxay waajib ka dhigaysaa tartan xisbiyada dhex mara Tartanaku waxa ka dhasha mucaarid iyo muxaafid. Mid waliba xil gooni ah oo u gaar ah ayaa saran.
Waxaan bogaadin u dirayaa dadweynah Soomaaliland meel ay joogaanba, dawlad iyo mucaarad, yar iyo weynba, gudo iyo debedba. Si gaar ah waxaan u hambalyeenayaa Madaxweynha Soomaaliland Axmed Maxamed iyo ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici, Guurtida, Wakiilada, La-taliyaasha Madaxweynha, Ciidanka Qaranka booliis iyo Militariba, Hoggaamada Xisbiyada, iyo xisbiyahanka dhabta ah. Waxaan leeyahay meel fiican ayeynu maraynaa, inta dhimman waa is faham iyo isla jaan qaad iyo dulqaad leysu yeesho, cadowga oo leyska jiro iyo danta guud oo loo wado guntado, iyo Illaahay oo la mahad iyo nabadda aynu ku suganay oonu wado ilaalino.
DHAMMAAN KU CIIDA NABAD, CAAFIMAAD, WANAAG IYO FARXAD.
Labels: AHMED ARWO, Democracy, Maqaalada Ahmed Arwo, NEWS, POLITICS, Somaliland